Ọgụ maka Ezumike Oge Ebube - Shozụ ahịa Google vs. Amazon Product Ads in Q4 | Martech Zone
Ọgụ maka Ezumike Oge Ebube - Shozụ ahịa Google vs. Amazon Product Ads in Q4
Tọzdee, Febụwarị 21, 2013 Andrew Davis
Ha na-ekwu "tinye ego gị ebe ọnụ gị dị." Okwu, n'okporo ámá, na ikekwe n'okporo ámá ọ bụla n'ụwa, bụ na Google na Amazon bụ ndị na-emepụta ego gị mgbe a bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Shozụ ahịa Google na Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon bụ ihe abụọ doro anya na abụọ dị ike, na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ ịzụ ahịa ịzụ ahịa (CSEs) dị adị. Ma onye ọ bụla maara nke ahụ. Ihe kachasị dị ka amaghị bụ ọkwa ala nke CSE Refeyim: Ihe omuma. Eziokwu na-ekpughe.
Kedu CSE bụ onye kachasị ngosi na Q4? Atụmatụ CPC na-atụle ahịa Google na Amazon Product Mgbasa ozi ndị dabere na ọnụọgụ dị ịrịba ama dị ka okporo ụzọ, ọnụego mgbanwe n'ogologo, na nkezi ọnụahịa kwa pịa (CPC). Ka anyị lee anya.
Amala jijiji. Uzo Amazon adabaghi ​​na Q3. N'ezie, ihe megidere ya mere. Trafficzụ ahịa Googlezụ ahịa Google dị nnọọ elu nke na okporo ụzọ Amazon dị obere. Google zigara 144% karịa ndị na-ere ahịa n'ịntanetị karịa Amazon. Ego ahụ ji okpukpu abụọ karịa nke okporo ụzọ. Nke a bụ ezigbo mmụba maka Google site na Q4 2011.
Na Q4 2012, Google zigara 96% okporo ụzọ ndị ahịa karịa Amazon. Gịnị kpatara ọdịiche ahụ na mberede? CSE ndị ọzọ, dị ka Shopzilla na Shopping.com, na-anata ọkwa nke nnukwu ọdọ mmiri okporo ụzọ Google ma bido ịkpọsa ngwaahịa na ppingzụ ahịa. Onye mmeri okporo ụzọ: Shozụ ahịa Google.
Ọnụego mgbanwe (CR)
N'ebe a, anyị na-ahụ ọnọdụ abụọ na-emegiderịta onwe ha. Kemgbe Q2 4, ọnụego mgbanwe nke Googlezụ ahịa Google ejirila nwayọ jụ site na 2011% ruo 3.1% na Q2.4 4. Nke ahụ bụ a 22.35% mbelata na otu afọ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere Amazon, onye ọnụego mgbanwe na-esi na 1.8% na Q4 2011 ruo 2.8% na Q4 2012. Nke ahụ bụ a 57.5% abawanye na otu afọ.
Gịnị kpatara ọdịiche ahụ? Kemgbe Google gbanwere ụgwọ CSE nke akwụ ụgwọ, ọ bịara doo anya na ọnụ ahịa ndị ahịa enweela nnukwu mmetụta na etu esi ekpughere ngwaahịa ndị na-ere ahịa nke ọma, yabụ, ọnụego mgbanwe ha. Onye mmeri ntụgharị: Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon.
Nkezi ego kwa Pịa (CPC)
Ọnụ ego ọ bụla bụ echiche ọhụrụ mara mma na Google. Naanị ha gbanwere n'ụdị akwụ ụgwọ ọnwa ole na ole gara aga na Ọktọba, yabụ anyị nwere ike ịhụ na site na Q4 2011 - Q2 2012, Google enweghị nkezi CPC.
Agbanyeghị, mgbe CPC ghọrọ isi ihe ọhụụ na azụmaahịa Google kwụrụ ụgwọ na Q3, ọ malitere dị ala karịa Amazon wee nọrọ n'ụzọ ahụ na Q4 niile, na-esi na CPC dị na $ 0.30 ruo $ 0.31. CPC dịkarịsịrị elu nke Amazon abawanyela ntakịrị karịa n'afọ gara aga, na-amalite na $ 0.33 na Q4 2011 wee na-arịwanye elu na $ 0.41 na Q4 2012. Ihe anyị na-ahụ ebe a bụ na CPC nke Google bụ 32.5% dị ọnụ ala karịa Amazon na Q4 2012. Onye mmeri CPC: Shozụ ahịa Google.
Ọ bụ ezie na eziokwu ahụ bụ na anaghị m elele usoro ndị ọzọ dị mkpa dị ka ọnụahịa nke ire ere (COS), ụtụ, na nzaghachi injin, Shozụ ahịa Google ka bụ ebe a. Na akụkọ zuru ezu (nke a ga-ahapụ na CPC Strategy Blog izu na-abịa), Google kwadoro onwe ya dị ka premiere CSE na Q4 n'agbanyeghị ịbụ onye ntà kacha nta akwụ ụgwọ.
Kedu ihe nke a pụtara maka ndị na-ere ahịa? Atụmatụ ịzụ ahịa oge ezumike gị, nke ị kwesịrị ịkwadebe ugbu a, kwesịrị ilekwasị anya na akụkụ buru ibu na Shozụ ahịa Google n'ihi na ọ bụ nnukwu nsogbu na onye na-eme ego n'oge ezumike.
Andrew bụ onye isi ahịa ahịa CPC Strategy. Na ngwụcha Septemba 2010, Andrew dechara akwụkwọ azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa mbụ nke na-enye nkọwa zuru oke banyere etu esi amalite ma jikwaa mgbasa ozi ịzụ ahịa dị irè. Taa, Andrew na-etinye oge ka ukwuu oge ya na-ajụ ndị ahịa na ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ ọnlaịnụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị ihe, na-ede ma na-eduzi ndị CPC Strategy Blog.
Akara Onye Mere Na-elekọta Mmadụ n'okpuru Agbọgbọ Mmiri - Mmiri Alaka, Biko!
Quintly: Social Media Ndepụta na Benchmarking
Feb 22, 2013 n’elekere 2:40 nke abali
Ọbụna ma ọ bụrụ na Shozụ ahịa lookzụ ahịa Google ka mma ma dọta uche m, enwere m akaụntụ Amazon nke e guzobere na ọnụahịa ndị ahụ dị ọnụ ala karịa (ugboro 9 site na 10 maka ihe m zụtara) ..
Feb 22, 2013 n’elekere 11:00 nke abali